कसरी तपाईंको डोमेन नाम बेच्ने Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 24, 2016 बुधबार, डिसेम्बर 28, 2016 Douglas Karr
यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रत्येक महिना ती डोमेन नाम पंजीकरण शुल्कहरू भुक्तान गर्न जारी राख्नुहुन्छ तर तपाईं यो प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कि भनेर आश्चर्य छ वा यदि कसैले तपाईंलाई खरीद गर्न सम्पर्क गर्दैछ भने। त्यहाँ केहि समस्याहरू छन्। पहिलो, होईन ... तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। आफैलाई ठट्टा गर्न रोक्नुहोस्, यो प्रत्येक वर्ष तपाईलाई धेरै गुणा महँगो लाग्ने खर्च हो जुन लगानीमा कुनै प्रतिफलको साथ हुँदैन। दोस्रो, कसैलाई थाहा छैन तपाईं वास्तवमै यसलाई बेच्दै हुनुहुन्छ - त्यसोभए तपाईं कसरी अफरहरू पाउनुहुनेछ?
एक दशक पहिले, प्रक्रिया एक डोमेनको whois खोजी गर्न को लागी, यसको स्वामित्व कसलाई हो पहिचान गर्ने थियो, त्यसपछि प्रस्ताव र काउन्टर-प्रस्ताव को नाच शुरू। एक पटक तपाईले मूल्यमा सहमति गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईले एस्क्रो खाता सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यो तेस्रो पक्ष हो जुन पैसालाई ठीकसँग हस्तान्तरण गरिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि होल्ड गरिएको छ। जुन बिन्दुमा, एस्क्रो खाताले विक्रेतालाई नगद जारी गर्दछ।
यो अब धेरै सजिलो छ। जस्तै सेवा प्रयोग गर्दै डोमेन एजेन्टहरू, तपाइँ तिनीहरूको सेवामा तपाइँको सबै डोमेनहरू सूचीबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले बिक्री को एक स्वस्थ हिस्सा ले, तर तिनीहरू एक खोज मार्केटप्लेस, एक अनुकूलन ल्यान्डिंग पृष्ठ, र एस्क्रो खाता सबै एकै प्लेटफर्म अन्तर्गत एकीकृत। यसले तपाईंको डोमेन पाउन र बेच्न सजिलो बनाउँदछ।
तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? अब ती सबै प्रयोग नगरिएका (र प्रयोग भएका पनि) थप्नुहोस्:
तपाईको डोमेन नाम खोज्नुहोस् वा बेच्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको डोमेनको सोध्ने मूल्य कसरी सेट गर्नुहुन्छ?
मैले यो धेरै समयदेखि गर्दैछु र त्यो गाह्रो प्रश्न हो। विक्रेताले देख्न सक्दछ कि यो एक कम्पनी वा धनी खरीददार हो जसले किन्नको लागि छ र ठूलो खरीद मूल्य सम्झौता गर्दछ। वा विक्रेता भोला हुन सक्छ र एक महान डोमेन नाम मुश्किल केहि को लागी जान दिनुहोस्। हामीले एक टन डोमेन नाम खरीद गरेर बेचेका छौं र यो सँधै तनावपूर्ण स्थिति हुन्छ। त्यहाँ केहि सरल नियमहरू छोटो डोमेनहरू हुन् जसमा ड्यास छैन वा संख्याहरू प्रायः उत्कृष्ट गर्दछन्। गलत हिज्जे शब्दहरूको साथ लामो डोमेन नामले राम्रोसँग गर्दैन।
यो TLD .com अझै खोजी लायक छ किनकि यो खोजी वा ब्राउजर बीचमा साइट फेला पार्न पहिलो प्रयास हो। यदि डोमेनसँग वास्तवमा सामग्री छ र खोज परिणामहरू ड्राइभ (मालवेयर वा अश्लील सामग्रीको गन्तव्य बिना), यसले आफ्नो कम्पनीलाई थप जैविक ट्राफिक वा अधिकार आफ्नो ब्राण्डमा ड्राइभ गर्न कोशिस गर्न लायकको पनि हुन सक्छ।
हाम्रो औंठाको नियम हाम्रो वार्तालापमा इमान्दारिता हो। म सँधै सिफारिस गर्दछु कि खरीददारले लेनदेन सार्थक हुनेछ वा हुँदैन भनेर द्रुत प्रतिक्रियाको साथ विक्रेतालाई पहिलो बिड प्रदान गर्न सक्दछ। एक खरीददारको रूपमा, हामी खुलासा गर्न सक्छौं कि हामी तेस्रो पक्षको तर्फबाट खरीद गर्दैछौं किनकि उनीहरू अधिक मूल्य तिर्ने बिना उचित मूल्य प्रदान गर्न चाहन्छन्। हामी विक्रेतालाई यो पनि थाहा दिन्छौं कि हामी डोमेनलाई के भुक्तानी गर्न चाहन्छौं बेच्नेलाई फ्याँकन बिना। वार्ताको अन्त्यमा, दुबै पक्षहरू अक्सर खुसी हुन्छन्।
बाक गर्न डोमेन एजेन्टहरू। मेरो डोमेन नामको लागि मेरो DNS अद्यावधिक गरेर, DomainAgents ले एक महान ल्यान्डि page पृष्ठ राख्दछ डोमेन खरीद गर्न सजिलो बनाउनको लागि। यहाँ एक महान उदाहरण छ, मेरो एक डोमेन जाँच गर्नुहोस् - ठेगानाfix.com.
यहाँ अरू डोमेनहरू छन् जुन हामीले बिक्रीको लागि राखेका छौं, केहि राम्रा र छोटो छन्, केहि लोकप्रिय छन् (र न्यूनतम बिडहरू महत्त्वपूर्ण छन्)।
खुलासा: हामी हाम्रो सम्बद्ध लिंक को लागी प्रयोग गरीरहेका छौं डोमेन एजेन्टहरू यो पोष्ट भर।
टैग: डोमेन बिक्रीप्रयोगक्षेत्रतपाईको डोमेन नामको कत्ति मूल्य छकसरी एक डोमेन नाम को मूल्यकसरी डोमेन नाम बेच्नेडोमेन बेच्नुहोस्डोमेन बेच्नुहोस्tld
कम्प्युटेक टेक सेवाहरू
डिसेम्बर १, २०१ 29 2016:२:8 अपराह्न
महान सल्लाहको साथ उत्कृष्ट पोष्ट। ती प्रयोग नभएका डोमेनहरू डम्प गर्नको लागि अधिक लागत प्रभावी छ, अधिक र अधिक वार्षिक ब्यक्ति शुल्क तिर्न जारी राख्नु भन्दा।